बुद्धिमायाको भाग्य बदल्ने प्रयासमा भाग्य न्यौपाने, अझै पुगेन पैसा ! [भिडियो हेर्नुहोस]
बुद्धिमायाको भाग्य बदल्ने प्रयासमा भाग्य न्यौपाने, अझै पैसा पुगेन ! [भिडियो हेर्नुहोस]
दुखी, पिडित र असहायको सहारा बनेका भाग्य न्यौपाने नाम जस्तै धेरैको भाग्य बदल्दै हिडेका छन् । अहिले सम्म उनले धेरै यस्ता पिडित ब्यक्तिहरुको निम्ति सहयोग जुटाईसकेका छन । केही दिन अघि मात्र तुईन तानेर हातका औला झरिसकेका वृद्ध बुबाको घर बनाउन पुगेका थिए । उनै वृद्ध बुबाको लागि सहयोग जुटेका रकमहरु लिएर पुगेका उनलाई देखेर वृद्ध बुबा धरधरी रोए ।
उनले तत्तातो खबरबाट आफ्नो भिडियो हरु सार्बजनिक गर्छन । उनको युट्युव च्यानलमा १ करोड भन्दा बढि सब्सक्राईबर रहेका छन । यसका सथै नयाँ नयाँ प्रतिभाको खोजी गर्दै हिड्ने गर्छन । अहिलेका चर्चित बाल कलाकार अशोक दर्जीलाई भाग्यले नै सार्वजनिक गरेका थिए ।
आज भने उनले बुद्धिमायाको बारेमा तयार पारेको भिडियो सार्बजनिक गरेका छन । काठमाडौंको एउटा कोठामा बस्दै आएकी बुद्धिमायाको अबस्था निकै नाजुक छ । मुटु भल्व र किड्नीको समस्या रहेकी बुद्धिमायाको लागि उनले जुटाएका ६ लाख रकम लिगेर पुगे तर उनको उपचारको लागि यति रकम प्रयाप्त नभएको जनाए । अझै ६,७ लाख लाग्ने उनले जनाएका छन ।
हिड्न समेत नसक्ने अवस्थामा पुगेकी बुद्धिमाया बाच्न चाहन्छिन । उनी रुदै भन्छिन “मलाई बाच्ने रहर छ, मेरो छोरा छ श्रीमान् छन्, म उनिहरु संगै बाच्न चाहन्छु ।” यस्तो कुरा सुन्दा उनका श्रीमान् पनि निकै रोए । उनलाई उचालेर यताउता सार्नुपर्छ । भिडियो ।